ထမင်းဘူးထဲမှာထည့်ထားတာကြက်ဥ မဟုတ်ဘူးတဲ့!!!! - JAPO Japanese News
ဟူး 15 Jan 2020, 16:35 ညနေ
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Convenience storeတွေမှာတော့ နေ့လယ်စာ ထမင်းဘူးတွေကို အမျိုးစုံနေအောင် ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဘယ်ဟာပဲကြည့်ကြည့် အရသာရှိမယ့်ပုံပဲနော်….
အမျိုးအစားအများကြီးထဲက တစ်မျိုးမှာတော့ ဒီလိုပုံစံမြင်ရမှာပါ….
Cheese တွေလည်းပါတဲ့ အီတလီစတိုင်ကြက်ဥကြော်တဲ့
အရသာရှိမယ့်ပုံပဲနော် !! ဒါပေမဲ့ အလယ်ခေါင်က ကြက်ဥအနှစ်လေးကရော စားလို့ အဆင်ပြေပါ့မလား?
ဒီလိုစတိုင်ကို カルボナーラ Karubonara လို့ခေါ်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ပုံလေးကတော့ ကြော်နေတုန်းမှာ မီးကိုပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကြက်ဥလိုအနှစ်လေးကို အလယ်ခေါင်မှာ ဖွဖွလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ မီးကို တဖြည်းဖြည်း ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီး အဲ့အချိန်မှာ အနှစ်လေးက မြင့်တက်လာတဲ့အပူချိန်နဲ့ မာမာဆတ်ဆတ်လေး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုအဆင်သင့် ထမင်းဘူးတွေကို ပြန်နွေးလို့ရပါ့မလား…?
အထဲမှာပါတဲ့ ကြက်ဥအနှစ်ကို အစိမ်းအတိုင်းထားတာ လတ်ဆတ်ပါ့မလား၊ စားလို့ရောအဆင်ပြေပါတော့မလား…?
လို့တွေးနေတဲ့ သူတွေ ရှိမှာပဲနော်.
လုံး၀ပြဿနာမရှိပါဘူး!! သေချာပေါက် နွေးပြီးစားလို့လည်း ရပါတယ်!!
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီအနှစ်လေးဟာ ကြက်ဥအနှစ်မဟုတ်လို့ပါတဲ့..အံ့သြစရာပဲနော်!!!
ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ အနှစ်လေးက ဆော့တစ်မျိုးပါတဲ့။ ထမင်းစားတဲ့အခါ ပိုပြီးအရသာရှိစေအောင် ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆော့လေးကိုတော့ အမြင်ပိုင်းမှာရော အရသာပိုင်းမှာပါ တကယ့်ကြက်ဥအစစ်အတိုင်း ပုံစံတူအတုခိုးထားတာတဲ့.. လုံး၀မထင်ထားစရာပဲနော်
အဲ့ဒီဆော့က အရည်ပုံစံပဲမဟုတ်၊ Half-boil ပုံစံလေးလည်း ရှိပါတယ်။
Half-boil ပုံစံလေးလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ ကြာချိန်ရော၊ အပူချိန်ကိုပါ သေသေချာချာ မတွက်ထားရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံမဖြစ်တော့ပါဘူး။ လုပ်ရကိုင်ရတာ နည်းနည်းတော့ အလုပ်ရှုပ်ပေမဲ့ ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ ပင်လယ်စာတွေရောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာတော့ ဒီဆော့ကို Half-boil ပုံစံအနေအထားနဲ့ အများဆုံးစားကြပါတယ်။
ဒါပဲမဟုတ်ဘူးနော်.. အသုတ်တွေထဲမှာထည့်တဲ့ ကြက်ဥလေးကလည်း ဒီလိုပုံစံလေးတဲ့
အသုတ်တွေလုပ်စားမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ပြားချင်းစီလှီးထားတဲ့ ဒီကြက်ဥ(ဆော့)ရဲ့ အရွယ်အစားဟာ နည်းနည်းကြီးနေပေမဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်တဲ့။……… (စားချင်နေပါပြီနော်)
ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်နဲ့ Convenience store တွေမှာ ရောင်းချနေပေမဲ့၊ ကြက်ဥအစစ်ထင်ပြီး စားနေကြတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေလည်းအများကြီးပဲတဲ့နော်..ဒါပေမဲ့ ဆော့ဖြစ်တဲ့အတွက် အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။
တော်တော်လေးကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ပုံစံတူဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ ချီးကျူးခံရပါတယ်။
စာဖတ်သူလည်း အခုမှသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ စာရေးသူတောင် ကြက်ဥအစစ်မဟုတ်မှန် ခုမှသိသွားရတယ်လို့။ ဂျင်းမိသွားတဲ့ အခိုက်အတန့်….(ရယ်လျက်…)
မသိသေးတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေတောင် အများကြီးရှိတယ်တဲ့။ ရှယ်ပေးလိုက်ပါအုံးနော်…..!!!!
ဒါဆို သင်အခုစားနေတဲ့ ကြက်ဥကရော တကယ့်အစစ်ဆိုတာ သေချာပြီလား?